Daawo: Sidan ayaad u codsan kartaa, lacagta dagpengerka, hadii shaqada lagaa fariisiyay. - NorSom News
Daawo: Sidan ayaad u codsan kartaa, lacagta dagpengerka, hadii shaqada lagaa fariisiyay.
Kadib markii uu xanuunka Corona-virus ka dilaacay Norway, boqolaal kun oo qof ayaa laga fariisiyay shaqooyinkii ay ka shaqeyn jireen, waxaana lagu sameeyay waxa loo yaqaan Permittering(Shaqo ka fariisin).
Dadka lagu sameeayay shaqo ka fariisinta ayaa xaq u leh inay helaan lacagta loo yaqaan Dagpengerka, waxaad muuqaalka hoose ka daawan kartaa, waxa aad xaqa u leedahay, qaabka aad u codsan karto, iyo dokumentiyada ay tahay inaad soo xareyso.
Dowlada ayaa aad usoo dajisay shuruudihii adkaa ee ku xirnaa dagpengerka, si dhamaan dadka shaqooyinka laga fariisiyay ay u helaan lacag ay ku noolaadaan.
Halkan ka daawo muuqaalka oo uu sharaxeyso mid kamid ah howlwadeenada NAV.
Sidoo kale, halkan kala soco wararka NorSom News oo muuqaal ah(Subcribe ku samee, si ay mal walba kuugu soo dhacaan).
Previous articleUD: Halkan ha iska diiwaangaliyeen, dadka safarka ku maqan.
Next articleFHI: Dadkan ayaa baaritaanka Corona-virus la hormarinayaa.